Chikwereti kugadzirisa mu "nemari Bank" munhu wechisikigo munhu: mamiriro ezvinhu, mashoko, zvinyorwa uye wongororo
Kutora chikwereti kubva Sberbank, munhu haagoni nguva dzose kuzadzisa mashoko chesungano. Life anoenderera mberi, murume ezvinhu akasiyana: kudzingwa, kurambana vakaroorana chirwere. Zvinogona ipiwe kugadzirisa chikwereti kubva Sberbank munhu. It hwezvekukurukurirana zvikuru zvinofanira kudzoka kubhengi chikwereti mumamiriro ezvinhu akaoma mune zvemari.
Kugadzirisa hakufaniri kuvhiringidzwa refinancing. Refinancing - ichi nyaya Sberbank chikwereti mari abhadhare zvikwereti yabviswa ne munhu nevamwe mabhanga. Chinangwa refinancing ndiko chokubatanidza zvikwereti wandei kupinda rimwe kana achideredza mubereko prices iri kare rakapa kwezvikwereti.
Chii - the kugadzirisa chikwereti iri mari Bank?
A dzinongoitika munhu anofanira kodzero kugadzirisa.
It asimbiswa kuva nezviito pamahombekombe kuti anokwereta, iro rinobatanidza kudzoka zvikwereti kuti vatengi pasina zvinopesana nzvimbo yaro zvemari. Kugadzirisa - ndiko kuti kuderedza chikwereti chimbadzo, kakawanda vachibhadhara uye kuwedzera kana kutapudza ya chikwereti.
Mhando chikwereti kugadzirisa
Ndezvipi zvinoitika kugadzirisa chikwereti iri mari Bank? A dzinongoitika munhu anopiwa mukana kusarudza:
- dzisashande kuripwa wechikoro ari chikwereti, anokwereta anoita kufarira chete - zororo chikwereti. Mune zvimwe zviitiko, kusunungurwa anoenda zvizere yakawanda muripo, asi runosvika kuti mumwe kumwedzi. Muchiitiko chino, munewo payakaipira: anokwereta zvingangoisa mungozi overpayment pamusoro chikwereti nokuda kwokuwanda kwaro muripo nguva.
- Nenachislenie kana kukanzura Zvirango uye kufarira kuti vavapo somugumisiro kunonoka kuripwa chikwereti.
- Kuderedza uwandu pamwedzi kubhadhara nokuwedzera izwi iri chikwereti.
- pokugadzwa nomumwe purogiramu vachibhadhara kuti akakwereta kurerutsa kubhadhara. Izvi zvinogona kuva kuchinjwa muripo musi, uye kuderera mipiro mune zvimwe mwedzi.
chikwereti kugadzirisa usakurirwe Sberbank
Sei chikwereti kugadzirisa mari Bank?
A dzinongoitika munhu anofanira kuziva kuti sarudzo iri chikwereti kugadzirisa anotora muhari. Under zvimwe zvinhu, Sberbank ari rubatsiro kuti chikwereti muripo anokwereta ayo. The Bank ane kodzero kufunga kushandiswa chikwereti kugadzirisa zvinotevera nyaya:
- Chekutanga, ndiye kunonoka pamusoro chikwereti kwemazuva anopfuura 30.
- Kurasikirwa huru mhando mari - kudzingwa.
- Zvinozivikanwa, vakatakura mune mamwe kuzvironga mari yacho anokwereta - kurasikirwa kugona kushanda, kurwara, kufirwa nehama.
- A zvikonzero ruremekedzo hunhu (kurasikirwa dzimwe mhando mari, pamuviri, kurasikirwa pakuriritira mhuri, vachisiya hondo, nezvimwewo).
- The rufu nechikwereti. Muzviitiko zvakadaro, akapa mugari wenhaka kuti kugadzirisa chikwereti iri mari Bank. Zvinoita kuti kuzvironga, uye unofanira kuita?
Application nokuti kugadzirisa
Application fomu unogona kuzadzwa vari bazi Sberbank, uye kukopa chimiro online, zadza uye tumira ne e-mail. Chaizvoizvo vanofanira kutaridzwa zvikonzero kugadzirisa, mhando mari nokuda mutsividzo pamusoro chikwereti pamusoro ezvinhu matsva, chinangwa rubatso hwokuchengetedza chikwereti (kana). Pashure pfupi mukwereti kubva mubhanga achadana uye kukoka yakananga dhipatimendi kukurukura mimwe co-kushanda kwacho. Ndinoshanda wakatora chikwereti nyanzvi, naye akanga nezvokuzivikanwa zvimwe zviito uye mazita zvaida magwaro.
Documents nokuti kugadzirisa
Zvinyorwa vanofanira kuratidza akaoma mamiriro ezvemari ari anokwereta:
- basa bhuku nhoroondo kudzingwa.
- Documents achisimbisa kudzikira mune zvemari nzvimbo: hurongwa kana kopi kupa mukadzi zororo iri maternity siya, kana kurayira kopi nourongwa anosiya pasina mubhadharo.
- sick ngavabude, mashoko kuremara.
- Information on mari.
- pasipoti of mugari wenyika Russian Federation.
The pamazita magwaro yakasiyana neimwe nyaya. Kana kushandisa unofanira kupfuura yakavimbika kurondedzera mamiriro ezvinhu mari kubhengi mushandi. Zvinofanira kurangarirwa kuti kugadzirisa chisarudzo chakaitwa ne Sberbank uye munhu haana kodzero pakushora Kurambwa pamahombekombe kushanda. Submitted magwaro akaedzwa. Zvadaro chisarudzo pamusoro tendero. Heunoi zvazvinoreva mu PJSC "Sberbank" chikwereti kugadzirisa. Terms uye zvinhu zvinofanira raanotaura dhipatimendi.
The kugadzirisa kadhi
Kadhi ndiyo inonyanya nyore muchimiro kunozvitenga. Kana nguva asingadi kudzima chikwereti pamusoro kadhi iri chikwereti mwero uye mubereko kubereka chikwereti saizi inokura. kuchinjwa chikwereti chacho mutsividzo nguva ;: Kana chisarudzo chakanaka pamusoro kugadzirisa kadhi chikwereti yeGmail.END_STRONG inotevera ezvinhu anogona kupiwa Kuparara mubereko uye vakakurumbira kubhadhara yunifomu; nokuwedzera kukura pakati chikwereti Akaroromesawo pamwedzi kubhadhara.
Kugadzirisa mogeji Sberbank
To munhu mukana kugadzirisa mogeji chikwereti. The pfuma ndiyo ivimbiso yokuti kubhengi, saka kubhangi haabati pangozi yokurasikirwa mari yavo. Kana mutengi rinomira kubhadhara, mbiri tsika akatengesa pfuma uye kudzorera mari.
Nokuti anokwereta pane njodzi kurasikirwa vachibhadhara hwakatozadzika akaripira pamusoro chikwereti. Izwi ane chikwereti chikwereti kugadzirisa guru. The Bank anogona kuramba yakavamba muripo, nharo kuti kuramba mutengi creditworthiness. The nemhosva vanofanira kuomerera urongwa sangano basa, sezvo iri nzira yakanakisisa nokuti mukwereti.
Reviews zvinoratidza kuti nokukuvadzwa chibvumirano pamusoro chikwereti dzinosanganisira nokuiswa fines, Zvirango. Kuti tidzivise kuwedzera chikwereti, anokwereta ari kutora matanho kugadzirisa chikwereti. Panyaya iyi, kuti chikwereti mari anowana makuru, asi chikwereti kuwedzera uwandu duku zvikuru pane nokuiswa marangirwo uye fines.
Vatengi vanogutsikana kuti pane mukana kugadzirisa. Kunoitawo kuti kudzivisa kuonekwa pamusoro pasuo pakati bailiffs nechisarudzo pamusoro kutorerwa pfuma nokuda basa iri, unogona kubvisa pamusoro foni muunganidzwa masangano, uye kudzivisa zvakaipa chikwereti nhoroondo. Prepay kuti chikwereti mushure kugadzirisa haisi wairambidza.
Zvino zviri pachena sei kuti kugadzirisa kuti chikwereti kubhengi chikwereti.
Modern mubhadharo hurongwa: User wongororo uye kureva yakanakisisa
Ndiani asingadi kuziva zvakawanda, kana chii kubhangi asingadi tarisa chikwereti nhoroondo
How kutumira kubva foni kuti kadhi mari? nemitemo nzira
The European Central Bank (ECB). Mashandiro of European Central Bank
Mari uye mari Market
Mepu pedyo sei "Tinkoff"? Zvinoita kuvhara kadhi, "Tinkoff" pamusoro paIndaneti?
Ko "Antipolitsay" inoshanda? Reviews. "Antipolitsay": sezvamunoita, mirayiridzo kushandiswa
Distance Learning: wongororo nenzira ano dzidzo
How dzokuzarura tsvimbo nemazvo
"Esterka Mafuta": vashandi 'mubasa kambani
Horse Chestnut - miti inoshandiswa mukurapa.
Openwork kukirosha beret - yakanaka headgear muzhizha
Mixtures nokuti vachangoberekwa
Lily muti - mumunda kushongedzwa
Guessing pamusoro mari: dzinokosha nzira uye dudziro
Shiseido okuzora, wongororo uye zvinonakidza zvikuru zvigadzirwa